March 16, 2020 - Myitter
ကျွဲစိမ်းပုလင်း အဖုံးမှ(၁၀)သိန်းဆု ကံထူးရှင်ထွက်ပေါ် ….
March 16, 2020 Myitter 0
မော်လမြိုင်တွင် ကျွဲစိမ်းပုလင်းအဖုံးမှ(၁၀)သိန်းဆု ကံထူးရှင်ထွက်ပေါ် မော်လမြိုင်မြို့ အမေရိကန်ဆေးရုံရှေ့ရှိ ဈေးဆိုင်တွင် ဆိုင်ရှင်မှ ကျွဲစိမ်းတစ်ပုလင်း ဖောက်သောက်ရာ (၁၀)သိန်းဆု ကံထူး။ မော်လမြိုင်ကတော့ အချိုရည်တွေထဲမှ ကံထူးရှင် ခဏခဏ ထွက်ပေါ်နေတဲ့မြို့ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တုန်းကလဲ Shark တုန်းက ဆိုရင် လည်း သိန်း(၁၀၀) ကံထူးရှင် မြောက်များစွာ […]
မြန်မာလေဆိပ်တောင် ဟုသေးရဲ့လားလို့ အံသြယူရလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွား​တဲ့​ ….
လေ ယာဉ်မဆင်းခင် လေယာဉ်ပေါ်မှာ Disinfection ဆေးဘူးတွေဖြန်း၊ အပူချိန်တိုင်း၊ Immigartion ကိုမဝင်ခင်မှာ Body Scan ဖတ်တယ်။မြန်မလေဆိပ်တောင်ဟုသေးရဲ့လားလို့ အံသြယူရလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွား​တဲ့​ အစိုးရရဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆင်ရေး။ So good to be back at home !ရန်ကုန်လေဆိပ်က အတော်စစ်ပါတယ်။ […]
မလေးရှား၌ တစ်ရက်တည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၁၉၀ ရှိ ….
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မတ် ၁၅ ရက်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၁၉၀ ဦး ရှိကြောင်း ကြေညာရာ တစ်ရက်တည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ “ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရတော့ အခု ကူးစက်တဲ့သူ တော်တော်များများဟာ ဂျာမတ်ဆရီပီတဲလင်း ဗလီက ဘာသာရေးအခမ်းအနား လူထုစုရုံးပွဲကနေ ကူးစက်တာ […]
ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကို အောငျနိုငျသှားသညျ့ တိုငျးရငျးဆေးပငျ
ဒီနမေ့တျလ ၁၆ရကျ (၂၀၂၀)မှာ ထိုငျးနိုငျငံ ကူးဆကျရောဂါပိုး တိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ က ကိုဗဈရောဂါပိုးတှကေို သဆေစနိုငျတဲ့ ဖါထလိုငျကြှနျေ ဆးဖကျဝငျ ฟ้าทะลายโจร အပငျဟာ ထိုငျးပွညျသူအတှကျ အသငျ့တျောဆုံး ရောဂါပိုးတိုကျဖကျြနိုငျကွောငျး ထုတျပွနျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဆေးခါးကွီး ပငျ အချေါGreen chiretta (穿心莲) ဆေးခါးကွီးကိုငရုတျခါး၊ကရငျဆေးခါးဟုအရပျဒသေကိုလိုကျပွီး […]
ပြဿနာ ကြီးထွားလာမည်စိုး၍ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးခွင့် ပိတ်မည်မဟုတ်ဟု ဂေါပက အဖွဲ့ပြော ….
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးမြှော်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ပါက နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ ကြီးထွားလာနိုင်သောကြောင့် ပိတ်ပင်မည်မ ဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ ဆက်လက်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးလှိုင်က ပြောသည်။ မတ်လ ၁၆ ရက်က ဘုရားဖူးများ များပြားလွန်းသည့်အတွက် တိုးဝှေ့နေသည့် ပုံများ ပျံ့နှံ့လာသည့်အပေါ် အကုန်သိ […]
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဥရောပ သုံးနိုငျငံတှငျ တရကျတညျး စံခြိနျတငျသဆေုံး ….
ဥရောပမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရမှုအမြားဆုံး ဖွဈနတေဲ့ နိုငျငံသုံးနိုငျငံမှာ မတျ ၁၆ ရကျနကေ့ တရကျတညျး သဆေုံးသူ စုစုပေါငျး ၁၂၀ ဦးအထိ ရှိသှားတာမို့ လူသဆေုံးမှု အမြားဆုံး စံခြိနျတငျသှားပါတယျ။ အီတလီမှာ သဆေုံးသူ ၃၆၈ ဦး၊ စပိနျမှာ ၉၇ ဦးနဲ့ ပွငျသဈမှာ […]
မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ ကိုရီးယားတို့ရဲ့ သက်ပြင်းချသံနဲ့ အီတလီတို့ရဲ့ ညည်းတွားသံ …..
“မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ ကိုရီးယားတို့ရဲ့ သက်ပြင်ချသံနဲ့ အီတလီတို့ရဲ့ ညည်းတွားသံ” ဒီနေ့တော့ တောင်ကိုရီးယားမှာ သေသူ မရှိ၊ လူနာအသစ် ၇၄ ယောက်ပဲ ထပ်တိုးလို့ တောင်ကိုးရီးယားတို့ သက်ပြင်းချနိုင်ပါပြီ..။ ဒီနေ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ မတ်လ ၁၆ ရက် အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် […]
ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်5ဦးအနက်1 ဦးအပါအဝင် အဆင့်မြင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီး 36 ဦးဝူဟန် Covid 19 ထိသွား ….
ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်5ဦးအနက်1 ဦးအပါအဝင် အဆင့်မြင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီး 36 ဦးဝူဟန် Covid 19 ထိသွား၍ထိမ်းသိမ်းကုသနေကြောင်းTV မှ တရားဝင် ကြေငြာပြီ… ( အဖိလတ် ခုမ်ဆုမ်ဖုမ် ကာချုပ်ကြီး) တပ်မတော်နယ်လှည့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တပ်မတော်သားရော ပြည်သူကိုပါ ကုသပေးဖို့ အစည်းအဝေးထိုင်နေကြပါပြီ… crd. TinaLisa unicode […]
သူဌေးလောင်း အားလုံးတို့အတွက် (၃)လုံးဂဏန်း တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု
လောကီပညာကို လိုက်စားကြသော မြန်မာဆရာများ၌ တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာဆရာအချင်းချင်း ပညာကို ဖလှယ်သော အလေ့အထ ရှိတတ်ကြ၏။ ထိုသို့ တစ်ဦးအား ပေးအပ်ကာ လဲလှယ်ကြရာ၌ ရှေးဦးစွာ`မိမိရှာဖွေတတ်သိထားသမျှ ပညာရပ်များတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် ကိုယ်တွေ့မှန်ကန်သော ပညာများကိုသာပေးပါမည်။ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ၍ ပေးခဲ့မိလျှင် ယခုတတ်ထားသမျှပညာများလည်း ပျက်ကွက်၍ မဟာအဝီစိငရဲ၌ မကျွတ်တန်းခံရပါစေ`ဟု […]
ပုသိမ်မြို့ မြေနုလမ်းတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေ …
Breaking News 16.3.2020 ပုသိမ်မြို့ မြေနုလမ်းတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေ … မီးများ အိမ်တွေ ဆိုင်တွေက အရမ်းစိတ်နေတော့ စိုးရိမ်ရ … credit Zin Moe unicode version Breaking News 16.3.2020 ပုသိမျမွို့ မွနေုလမျးတှငျ မီးလောငျမှု […]
အမြိုးသမီးတဈဦးနှငျ့ ငွိစှနျးပွီး ကလေးတဈဦး ရှိထားသညျဟု စှပျစှဲမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး မနောမယဆရာတျော ရှငျးလငျးမိနျ့ကွား